अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउन खोज्ने बिरुद्ध प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन ः पीडित 2070/04/15 दैनिक संवाददाता राजविराज, १४ साउन । आफुहरुलाई बिभिन्न प्रलोभन देखाई अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउन खोज्ने बिरुद्ध प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गर्दै आएको पीडित युवतीहरुले बताएकी छन् । ... विस्तृत
का“ग्रेस र एमालेका कारण मुलुकमा संविधान बन्न सकेन ः प्रभु साह 2070/04/15 दैनिक संवाददाता राजविराज, १४ साउन । एकिकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री प्रभु साहले उधारो सहमति गर्ने र नगदीको बेला धोका दिने काँग्रेस र एमालेको प्रबृतिका कारण मुलुकमा संबिधान बन्न नसकेको बताउनुभएको छ । ... विस्तृत
जन ज्योतिले २२ जनालाई बनायो रिक्सा मालिक 2070/04/14 दैनिक संवाददाता राजविराज, १३ साउन । “आजको रिक्सा चालक भोलीको मालिक” योजना अन्तरगत जन ज्योति कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड मलेठ सप्तरीले हालसम्म २२ जना रिक्सा चालकलाई मालिक बनाइसकेको छ । ... विस्तृत
ठेकेदारसहित १० जना वन तस्कर पक्राउ 2070/04/14 दैनिक संवाददाता राजविराज, १३ साउन । वन कार्यालयको गस्ती टोलीले शनिवार राती सप्तरी र उदयपुरको सिमानामा पर्ने कंग खोलास्थित जंगलबाट ठेकेदार सहित १० जना तस्करहरुलाई रंगेहात पक्राउ गरेको छ । ... विस्तृत
एउटै नम्बरको दुई मोटरसाइकल 2070/04/13 राजविराज स्थित ग्यारेजमा एउटै नम्बरको दुई वटा मोटरसाईकल शनिबार फेला परेको छ । एउटै नम्बरको ती दुईवटै मोटरसाईकल मर्मत गराउन ग्यारेजमा पुगेपछि यस्तो रहस्य फेला परेको हो । राजविराज–सखडा सडकस्थित ग्यारेजमा एकपछि अर्काे एउटै नम्बर स.२ प. ६८१० नम्बरको मोटरसाईकल भेटिएपछि स्थानियहरुले प्रहरी र सञ्चारकर्मीहरुलाई खबर गरेको थियो ।... विस्तृत
स्व. सिंहको योगदान उल्लेखीय ः वक्ताहरु 2070/04/13 राजविराज÷सप्तरीको शैक्षिक र समाजिक विकासमा राजविराज निवासी स्वर्गीय डा. नागेश्वर प्रसाद सिंहको योगदान उल्लेखीय रहेको राजविराजमा शनिवार आयोजित एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले बताएका छन् । स्वर्गीय सिंहको स्मृति दिवसमा राजविराजस्थित जेसीज भवनमा आयोजित कार्यक्रमका बक्ताहरुले स्वर्गीय सिंहको मार्गलाई आत्मसात गरी अघि बढ्न सके सप्तरीको विकासले गति लिने विश्वास समेत ब्यक्त गरेका छन् । ... विस्तृत
अर्धभूमिगत भएको छैन् ः जेपी गुप्ता 2070/04/13 राजविराज÷तराई मधेश राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले आफू अर्धभूमिगत नभएको जानकारी दिनु भएको छ । गुप्ताद्वारा प्रेषित विज्ञप्तिमा प्रहरीले आफूलाई निगरानी गरेको कुनै महसुस नभएको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ ।... विस्तृत